6 metatra ny slot cube antenna
rahoviana filokana ho ara-dalàna any texas
rehefa filokana dia nisokatra indray in nevada
rehefa filokana dia nisokatra indray any illinois
Isan-karazany ny foko sy ny fikambanana raha toa ny fanohanana ara-bola ho an'ny fandaniana ny fanjakana fepetra. Mahaliana, DraftKings no hany solontena avy ao amin'ny lalao tahiry ampahany ho voatanisa 6 max poker latabatra toerana.
MGM te-hividy avy Entain Plc ho tanteraka ny fanaraha-maso ny niara-nitarika BetMGM fanatanjahan-tena betting mpandraharaha, ary ankehitriny dia afaka manao hafa asao 6 metatra ny slot cube antenna. Nanamarika izy fa tsy ara-dalàna sy tsy nifehy betting dia manimba California. Io no ANTSIKA sehatra fahazoana ho antsika, tsy manova, fa koa mitombo haingana ara-bola ny tompon'ny petra-bola." Jordana Barstool Fanatanjahan-tena efa nanamby Las Vegas monina handicapper Kelly Stewart rahoviana filokana ho ara-dalàna any texas.
Dodd no mafy tohanan'ny online betting sy mino ny hafa dia mety ho manimba ny fanjakana manontolo. Tamin'ny volana janoary, MGM Elas Nomerika, ny orinasa rindrambaiko ao amin'ny blockchain toerana, dia atolotra ny tatitra Aostraliana antenimieran-Doholona manazava amin'ny antsipirihany mikasika ny fahaiza-manao ny Bitcoin ANARANA.
Araka ny Arizona Sampan-draharaha ny Lalao, ny fitsipika ho an'ny fantasy fanatanjahan-tena sy ny hetsika betting efa nanaiky Izany tsy nisy fanontaniana ny raha, fa ny fanontaniana ny fony rehefa filokana dia nisokatra indray in nevada. Ny lehiben'ny mpanatanteraka ny Maina Creek Rancheria Tarika ny Buang Indiana' ny Renirano Vatolampy Casino, Hitory Ascanio, nilaza fa ny antoko manohana ny fepetra na dia eo aza ny tsy fandraisana anjara ara-bola mbola. Samy DraftKings sy FanDuel nahazo ny manomboka amin'ny fanatitra isan'andro fantasy sports (DFS) fifaninanana sy ny maro hafa, fa DraftKings toa nisintona hatrany rehefa filokana dia nisokatra indray any illinois. Ny fanjakana fepetra ao amin'ny fanontaniana dia voalahatra ho amin'ny fifidianana tamin'ny volana novambra taona manaraka ary mety hahatonga foko trano filokana, ary ny efatra soavaly lalamby tao California ny hany toerana izay fanatanjahan-tena betting dia navela, ary koa ny ara-dalàna roulette sy ny dice lalao.